Abafundi banikwe ithuba lokuqopha umlando | News24
Abafundi banikwe ithuba lokuqopha umlando
EMVA kokuhlanganiswa kwemikhandlu iHibiscus Coast kanye neZinqoleni ukuba babe ngumasipala owodwa, abafundi sebenikezwe ithuba lokuba badwebe ilogo yalomasipala omusha ozobizwa ngeRay Nkonyeni Municipality.
Emhlanganweni obubanjwe ezindlini zomkhandlu iHibiscus, okhulumela umasipala uSimon April uthe labafundi abangalithathi kancane lethuba abanikezwa lona.
“Abafundi bakubona yombili lemkhandlu abafunda uGrade 10 kuya kumatikuletsheni kanye nalaba abafunda ezigkhungweni eziphezulu ezikubona bobalili labomasipala, banikwa ithuba lokuthi bazakhele umlando. Lelithuba akusilo elokuwina kuphela kepha elokuthi lo ozowina igama lakhe libe semabhukwini aqopha umlando akulomasipala,” kusho uApril.
Imininingwane yokungenela lomncintiswano yakhishwa emaphepheni nakuwebusayithi kamasipala.
UApril uthe umncitiswano uhlelwe ukuba uvalwe mhlaka 2 enyangeni ezayo uOktoba.
“Amajaji azoketha owinile kuzobe kungabantu abakwi Political Change Management Commitee (PCMC) phechelezi ababhekela ushintsho kwezepolotiki,” kusho uApril.
“IPCMC izothatha isinqumo sayo bese isidlulisela kubona omasipala. Uma kuvunyelwana ngalesisinqumo kuzobuyelwa emphakathi kuzwiwe uvo lwawo ngaphambi kokuthi konke kuphasiswe,” kusho uApril.
Abanesifiso sokungenela bangadweba amalogo abo bese bewahambisa kothishanhloko ezikoleni zabo lapho ezothathwa khona ihhovisi likamasipala wabo